Wararka Suuqa Kala Iibsiga Caawa: Lionel Messi Oo Heshiis Shan Sano U Saxiixaya Barcelona Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Lionel Messi oo heshiis Shan sano u saxiixaya Barcelona iyo qodobo kale
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal kula jirto Bruno Fernandes si ay heshiis cusub uga saxiixdaan Old Trafford. Fabrizio Romano ,
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso Callum Hudson-Odoi , Hakim Ziyech iyo Tammy Abraham inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan si ay lacag ugu hesho saxiixa Erling Braut Haaland . sida laga soo xigtay Bild ,
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa in ay bixin doonaan lacag dhan 42 milyan oo euro hadii ay doonayaan saxiixaweeraryahanka Lazio Joaquin Correa inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Sida laga soo xigtay Tuttomercatoweb
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay 25 milyan ginni dul dhigtay daafaca dhexe Kurt Zouma . Sida laga soo xigtay RMC Sport
Taylor Booth ayaa wadahadal kula jira inuu qandaraas cusub u saxiixo Bayern Munich laakiin waxaa la filayaa inuu amaah ku baxo, sida ay qortay ESPN .
Liverpool ayaa diiday fursad ay kula soo saxiixan laheyd Ozan Kabak oo amaah uga yimid Schalke kaliya for 8.5 million ($ 11.75m), Goal
Donnarumma, oo 22 jir ah, ayaa si bilaash ah ugu biiray kooxda reer France, isagoo u saxiixay kooxda shan sano oo qandaraas ah. Goal
AC Milan ayaa diiday dalab € 40 million (£ 34m / $ 47m) oo ay ka gudbisay Theo Hernandez. Tuttosport
Lionel Messi ayaa qalinka ku duugi doona heshiis cusub oo shan sano ah oo uu ku joogi doono kooxda Barcelona waxana uu goyn doonaa mushaharkiisa boqolkiiba 50% Goal
Tottenham ayaa qarka u saaran inay soo nooleyso xiisihii ay u qabtay daafaca dhexe ee Inter Milan Skriniar – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sevilla Bryan Gil ayaa xiiseynaya Valencia – sida laga soo xigtay COPE .
Keylor Navas ayaa qarka u saaran inuu sii joogo Paris Saint-Germain inkastoo Gianluigi Donnarumma uu ku soo wajahan yahay kooxda – sida laga soo xigtay ESPN .